”Opération Jamala” tany Ambilobe: rongony 800 kilao nodorana, saha 2.5 Ha nopotehina | NewsMada
Midadasika! Hita ny sahan-drongony maherin’ny 2.5 Ha, izay tsy maintsy nopotehina. Tratran’ny zandary tamin’izany koa ny rongony 35 gony, milanja 800 kilao izay nodorana. Olona 11 no tao anatin’ity tambajotra mpanao trafikan-drongony any anaty ala ity…
Hita, nandritra ny “Opération Jamala” notanterahin’ireo zandary tao Ambilobe, ny alan-drongony amina velaran-tany 2,5 ha ao Mahadera, distrikan’Ambilobe, ny 9 oktobra teo. Raha ny fanazavan’ny loharanom-baovao, miisa telo ny olona voarohirohy amin’ity tranga ity. Fantatra ihany koa fa ny alin’io fotoana io no nahatrarana olona miisa telo tao anaty ny alaben’ny distrikan’Ambanja niaraka tamin’ny rongony 35 gony, milanja manodidina ny 800 kilao. Miandahy miambavy, hoy ny loharanom-baovao, ny fanaovana trafikana rongony tratra tao amin’ireo toerana ireo noho izy ireo mitotaly 11. Araka ny fanazavana voaray, nopotehina sy nodorana ireo foto-drongony marobe ireo niaraka amin’ireo gony maro rehefa nisy ny fahazoan-dalana ananan’ireo manam-pahefana rehetra. Mbola mitohy, hoy ny zandary ao an-toerana, ny fikarohana ireo minia manao ny asa ratsy ary mitsofoka any amin’ireo sahan-drongony ihany koa izy ireo ahafahana misambotra ireo mpanao izany.
Isan’ny nahitana olona nilanja rongony ihany koa ny tao Betroka. Fantatra tamin’ny angom-baovao fa milanja 25 kilao ireo sarona ireo niaraka tamin’ilay nitondra azy. Voalaza fa isan’ireo fanamby apetraky ny zandary ao Betroka ny fanenjehana fanondranana rongony ary ny fivarotana izany any an-toerana. “Mitarika ny olon-dratsy harisika hanao ny asa ratsiny izany”, raha ny fanamarihana hatrany. Fantatra fa manimba ny tanora maro ao an-toerana ny fifohana zava-mahadomelina. Mitohy kosa ny fisavana ireo toerana sy ny trano ahina hisy jamala, ankoatra ny fanaovana fitsirihana ny kizo sy ny lalana rehetra fandehanan’ireo mpanao aferan-drongony any an-toerana. Araka ny fantatra, manainga ireo rehetra manam-baovao marim-pototra ny zandary ao Betroka hahafahana mampanjaka ny fandriampahalemana any an-toerana. Hatolotra ny fampanoavana aorian’ny famotorana atao aminy ity raim-pianakaviana nahatrarana rongony ity, ary hodorana kosa ny rongony rehefa mahazo alalana ahafahana miroso amin’izany.
Tafiditra hatrany ao anatin’ireo ady ataon’ny zandary sy ny mpitandro filaminana famongorana ny rongony. Isan’andro, ahahenoana olona voakasika izany avokoa na eto an-dRenivohitra na any amin’ny faritra. Maro, araka izany, ny efa voasambotra momba ity raharaha ity nefa mbola maro ihany koa ny manao izany trafika izany. Mety ho fongotra tanteraka ve ny fanaovana izany sa hijanona ho ady sahanina hatrany rahatrizay?